बढ्दो आयु, रोजगारी र निवृत्तिभरण | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण बढ्दो आयु, रोजगारी र निवृत्तिभरण
on: २७ श्रावण २०७५, आईतवार ०६:१० लेख | दृष्टिकोण
बढ्दो आयु, रोजगारी र निवृत्तिभरण
विश्वमा जनसङ्ख्या संरचनामा परिवर्तन आइरहेको छ । केही देशमा जन्मदर घटिरहेको छ । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधा, उन्नत प्रविधिको विकास आदिले समग्रमा औसत आयु बढिरहेको छ । यसले गर्दा काम गर्ने उमेर भएको समूह खुम्चिँदै गएको छ र वृद्धहरूको जनसङ्ख्या बढ्दो छ । जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, मेक्सिकोलगायत देशमा सन् २०५० सम्ममा कुल जनसङ्ख्याको १ चौथाइभन्दा धेरै ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरसमूहका हुने विभिन्न प्रक्षेपण छन् । यसमा पनि १ सय वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहको जनसङ्ख्या पनि बढिरहेको छ ।
सन् २०१५ मा विश्वमा १ सय वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसको सङ्ख्या करीब ४ लाख ५१ हजार रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूएन)को तथ्याङ्कले देखाएको थियो । यो सङ्ख्या आउँदो ३ दशकमा आठ गुणाले बढेर ३६ लाख ७६ हजारमा पुग्ने यूएनको प्रक्षेपणले देखाएको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका र बेलायतमा त यो उमेरसमूहका मानिसको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । बेलायतमा पछिल्लो १ दशकमा सय वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूहको जनसङ्ख्या ७० प्रतिशतले बढेको छ । पहिलो विश्व युद्धताका जन्मिसकेका १ लाख ४ हजारभन्दा बढी मानिस अझै त्यहाँ जीवित छन् । धनी देशमा अहिले जन्मिएका अधिकांश बालबालिका १ सय वर्षसम्म बाँच्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मानिसको औसत आयु मात्रै बढेको छैन, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि सुधारिएको छ । यस्तोमा उनीहरू बढी काम गर्न सक्ने भएका छन्, उत्पादकत्व पनि बढेको छ । वृद्धवृद्धाहरू पनि आपैm काम गर्न सक्ने हुन थालेका छन् । अर्थात् उनीहरू आर्थिक रूपमा अरूमाथि निर्भर हुनु नपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यस्तोमा भावी पुस्ताले सेवानिवृत्त हुने भन्ने अवधारणालाई नै त्यागे (अर्थात् जीवनभरि काम गरिरहने हुन थाले) भने त्यतिबेला वृद्धवृद्धाका लागि कस्तो खालको काम उपलब्ध होला ? तिनीहरूले कस्तो काम गर्न सक्लान् ? ती काम गर्न त्यो समूह सम्पूर्ण रूपले सक्षम होला कि नहोला ? गर्नका लागि पर्याप्त काम पाइएला कि नपाइएला ? हामीलाई काममा राख्न चाहनेहरू पाइएलान् कि नपाइएलान् ? यस्ता प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन् ।
बुढेसकालमा मानिसले यो काम गर्न सक्छ, त्योचाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने छैन । सय वर्षको उमेरमा पनि मज्जाले सक्रिय भएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बेलायतदेखि क्यालिफोर्निया र भारतसम्मका कयौं व्यक्तिले पुष्टि गरेर देखाइदिएका छन् । केही समय पहिला बेलायतका १ सय ६ वर्षीय वृद्ध डाक्टर बिल फ्र्याङ्कल्याण्डबारे समाचार सार्वजनिक भएको थियो । ‘एलर्जीका हजुरबुबा’ समेत भनेर चिनिने ती डाक्टरले अहिले पनि वर्षेनि हजारौं बिरामीको उपचार गरिरहेका छन् । यति मात्रै होइन, उनले पत्रपत्रिकामा लेख प्रकाशित गर्नेदेखि मानिसहरूलाई एलर्जीबारे परामर्शसमेत दिइरहेका छन् । दैनिक समय तालिका निकै व्यस्त बनेपछि उनले एउटा सहायक राखेर काम गरिरहेका छन् ।
इटलेली मूलका अमेरिकी एन्थोनी मान्सेनेलीले विश्वका सबैभन्दा वृद्ध हजामका रूपमा गिनिज बूक अफ वल्र्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाइसकेका छन् । सन् १९२३ मा १२ वर्षको उमेरदेखि नै कपाल काट्ने पेशा अपनाएका उनले यस पेशामा ९५ वर्ष बिताइसकेका छन् । १ सय ४ वर्षको उमेरमा पोल्याण्डका धावक स्टानिस्ल कोवाल्स्कीले १ सय मिटरको दौडमा विश्व कीर्तिमान तोडेका थिए । अहिले युट्यूबमा भारतकी १ सय ७ वर्षीय बूढी हजुरआमा मस्तनाम्मा निकै भाइरल बनेकी छन् । उनले आफ्ना करोडौं फ्लोअरलाई विभिन्न परिकार बनाउने विधि सिकाउँदै आएकी छन् ।
बुढेसकालमा काम नै नगरी दिन कटाउन कम्ती गाह्रो हुँदैन । स्वास्थ्य अवस्थाले नै दिँदैन भने छुट्टै कुरा । होइन भने स्वस्थ मानिस काम नगरी बस्दा त्यसको उल्टो असर देखा पर्छ । सक्रिय जीवनयापन गर्नेहरूको आयु लामो हुने सर्वेक्षणहरूले पनि देखाएको छ । झण्डै १ दशकअघि अष्ट्रियामा भएको सर्वेक्षणले शारीरिक परिश्रम पर्ने काम गर्नेहरूमा चाँडै सेवानिवृत्त र मृत्युबीच सहसम्बन्ध रहेको देखाएको थियो । सो सर्वेक्षणमा साढे ३ वर्ष ढिला सेवानिवृत हुनेको तुलनामा साढे ३ वर्ष पहिला सेवानिवृत्त हुनेहरूमा ६७ वर्षको उमेरमै मृत्यु हुने सम्भावना १३ प्रतिशत बढी पाइएको थियो । विशेषगरी जीवनसाथीको मृत्यु भइसकेका र एक्लै जीवनयापन गरिरहेका पुरुषहरूमा यस्तो पाइएको थियो ।
वृद्धवृद्धा उत्पादनमूलक काम गरेर समय कटाउन, दैनिक खर्च जुटाउन काम गर्न चाहन्छन् । यही चाहनालाई दृष्टिगत गरेर विभिन्न देशमा निश्चित क्षेत्रका काममा वृद्धवृद्धालाई मात्रै राख्ने प्रचलन पनि बढेको छ । ४ वर्षअघि बेलायती आन्त्रप्रेनर पिटर नाइटले कर्मचारीका रूपमा वृद्धवृद्धालाई भर्ती गर्ने एजेन्सी फोर्टिज पिपुल स्थापना गरेका थिए । नेपालमा भने यस्तो प्रचलन शुरू भएको छैन ।
काम गर्न सकिएला ?
बुढेसकालमा जवान हुँदाको जस्तै गरी काम गर्न त सकिन्न । सो उमेरमा शारीरिक परिश्रम बढी पर्ने काम गर्न पनि गाह्रै हुन्छ । तर, पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण अधिकांश काम मेशिनहरूले नै गर्ने भएकाले काम गर्न सहज भएको छ । वृद्धवृद्धाको मुहार जवानको भन्दा बढी चाउरी होला । तर, उनीहरूसँग अनुभव बढी छ । बढी जोखीमयुक्त काम गर्ने तत्परता नभए पनि उनीहरूले विस्तारै तर राम्रोसँग काम गर्न सक्छन् । अरूलाई आफूसँग भएको शीप सिकाउन पनि सक्छन् । शीप र खुबी भएकाहरूलाई उमेरकै कारण काम गर्न नदिँदा एकातिर उनीहरूको शीप त्यसै मरिरहेको छ भने शीप सिकाउन तालीममा ठूलो परिणाममा रकम पनि खर्च भइरहेको छ ।
सय वर्षको उमेर पुगिसक्दा पनि काम गरिराख्नु चुनौतीपूर्ण भने छ । हरेक कम्पनीहरूले अनुभवीभन्दा पनि युवा, ‘डाइनामिक’, ‘भाइब्रेण्ट’ कर्मचारी/टीम खोजिरहेका हुन्छन् । थोरैले मात्रै परिपक्व कामदारको चाहना राख्छन् । त्यसैले, औसत आयु बढिरहेकाले कम्पनीहरूले पनि युवा र वृद्ध सबै खालका कर्मचारी राख्ने नीति ल्याउन पर्छ ।
सेवानिवृत्तिको उमेर हद बढाउन सुझाव
विश्व आर्थिक मञ्चले गतवर्ष एक प्रतिवेदनमा अमेरिका, बेलायत, जापान र क्यानडालगायत ७० देशमा सन् २०२५ सम्ममा औसत आयु १ सयभन्दा माथि पुग्नेतर्फ औंल्याउँदै सेवानिवृत्तिको उमेर हद ७० वर्ष उमेर पु¥याउन सुझाव दिएको थियो । पछिल्लो समय जर्मनी, जापानलगायत देशहरूले त सेवानिवृत्तिको उमेर हद बढाउने निर्णय नै गरिसकेका छन् ।
बुढेसकालमा काम गर्छु वा गर्नुपर्छ भन्ने सोच सबै मानिसमा नहुन सक्छ । कसैले यस्तो सोच्लान् । कतिले भने जीवनभरि काम गरियो बुढेसकालमा त बसीबसी खानुपर्छ भन्ने सोचेका पनि हुन सक्छन् । उमेर बढ्दै जाँदा देखा पर्ने बुढ्यौली र स्वास्थ्य समस्याले काम गर्न असहज पनि होला । तर, गर्न चाह्यो भने नसकिने भने होइन । अहिले नेपालका अधिकांश युवा कामका लागि विदेश गइरहेका छन् । कतिपय क्षेत्रमा भनेको जस्तो दक्ष कामदार पनि पाउन मुशिकल छ । भविष्यमा यस्तो स्थिति बढेर वृद्धवृद्धाहरूलाई पनि भर्ती गर्नुपर्ने खालको स्थिति आउन सक्छ । यदि त्यस्तो हो भने कम्पनीहरूले पनि अहिल्यैदेखि आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न थाल्नुपर्छ ।
पछिल्लो केही वर्षयता नेपालीको औसत आयु पनि बढिरहेको छ । अहिले नेपालीहरूको औसत आयु ७० वर्ष रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०११ मा नेपालमा १ सय वर्षभन्दा बढी उमेरको मानिसको जनसङ्ख्या ३ हजार ५ सय ६६ रहेको थियो । यसमध्ये १ हजार ८१ पुरुष र २ हजार ३ सय ८५ महिला थिए । नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाले बढी सक्रिय जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन् । घरायसी काममा बढी खटिने, सक्रिय जीवनयापन गर्ने भएकाले पनि १ सय वर्षभन्दा बढी उमेरको जनसङ्ख्यामा पनि महिला सङ्ख्या धेरै भएको हो ।
नेपालमा अहिले सरकारी सेवामा ५८ वर्षमा सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था छ । यसको अर्थ हो, औसत नेपालीले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भए पनि १२ वर्षसम्म पेन्सन खान पाउँछ । तर, भविष्यमा नेपालीहरूको औसत आयु पनि १ सय वर्ष पुग्यो भने निवृत्तिभरण समय पनि अहिलेको तुलनामा साढे तीन गुणा बढ्छ । तर, यसका लागि अझै लामो समय कुर्नुपर्छ । सन् २०५० र सन् २१०० मा नेपालीको औसत आयु क्रमशः ७८ दशमलव ३ वर्ष र ८५ दशमलव शून्य ४ वर्ष हुने प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपाल सरकारले ३६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पेन्सन बाँडेकोमा आव २०७४÷७५ मा यो बढेर ४० अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँमा पुगेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बढ्दो औसत आयु, वर्षेनि तलबमा भइरहेको वृद्धिका कारण भविष्यमा पेन्सनको भार अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने हुने र नेपाल पनि ग्रीसजस्तै टाटा पल्टिने चिन्ता पछिल्लो समय बढेको छ । पेन्सन प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने वा यसमा सुधारको आवाज पनि उठेपछि सरकारले योग्यतामा आधारित पेन्सनको अवधारणा पनि ल्याइसकेको छ । सरकारी सेवामा भएकाहरूले पेन्सन खाएर जीवन गुजारा गरे पनि निजीक्षेत्रमा भने त्यस्तो अवस्था छैन । भविष्यमा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आपूmले सकुन्जेल काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने कस्तो काम गर्न पाइएला ? यो समयले नै देखाउनेछ ।